Abavukuzi baseChia bagxumela olwandle futhi bathengisa konke | Kusuka kuLinux
Okuhle | 09/09/2021 17:17 | Kubuyekezwe ku- 10/09/2021 00:08 | Izaziso
Emasontweni ambalwa edlule umkhuhlane omusha we-cryptocurrency waqala ukusakazeka kunethiwekhi, ikakhulukazi eyodwa eyayithembise imvelo, i-cryptocurrency UChia, kepha lokho kugxekwe kabuhlungu ezinyangeni ezisanda kwedlula futhi inani lalo lehle kakhulu emasontweni adlule njengoba abavukuzi beqale ukushiya i-cryptocurrency.
Futhi yilokho emasontweni edlule abavukuzi abaningana baqale ukuthengisa kabusha i-hardware yabo, ikakhulukazi avuselelwe ama-hard drive e-SSD. Badlulisa ama-SSD abo asetshenzisiwe amasha futhi bayazithengisa, kusukela I-Chia ivame ukubhubhisa ama-SSD, kuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuthi lawo madrayivu "amasha" aqale ukwehluleka.
I-Chia iyisisekelo semali ye-bitcoin yohlobo lwe-cryptocurrency chia. Kususelwa ku-blockchain exhumene yokwakhiwa kwezibalo okususelwa esivivinyweni sokuba nesikhala sediski isikhathi esithile.
Kuthiwa ayifuneki kangako ekunikezelweni kwamandla kune-bitcoin, esekwe kubufakazi bomsebenzi futhi edinga inani elikhulu lokucubungula i-CPU. Isimiso se-Chia silula: lapho ibhulokhi yakhelwe ku-blockchain, isakazeka kuzindawo zenethiwekhi. Lapho umvukuzi ethola elinye lamabhulokhi, balishicilela kuyo yonke inethiwekhi bese abanye banikeza ubufakazi obuhle bendawo.
Okusho ukuthi, isitoreji abangasenza sitholakale kunethiwekhi, ezintathu ezinhle kakhulu zidluliselwa kwinethiwekhi, futhi enye "yamaseva wesikhathi" ayiqukethe iqinisekisa isikhathi sokuhlolwa okwanikezwa ngakho-ke, i-block entsha iqinisekiswa.
Umqondo ngukuthi wonke umuntu unesikhala sokugcina samahhala esingasetshenziswa ukuqinisekisa lokhu kuthengiselana ngaphandle kokwenza izindleko ezengeziwe zokusetshenziswa. Kusukela kwethulwa i-Chia, i-cryptocurrency entsha ibangele izinguquko ezithile emakethe ye-hard drive. Ngokusho kwenkampani yocwaningo iContext, iqale ngokuqina ngendlela exakile, okuholele ekushodeni okukhulu kwe-hard drive.
NgoJuni, kwabikwa ukuthi ngaphansi nje kwama-200.000 amayunithi okugcina amabhizinisi asezingeni elincane anamandla we-10 TB nangaphezulu athengiselwa abasebenzisi bokugcina eYurophu ngo-Ephreli, okusho ukukhula ngo-240% uma kuqhathaniswa nenyanga efanayo ngo-2020.
Ngasikhathi sinye, ama-hard drive ebanga lomthengi we-NAS athengise cishe ama-250.000 drives, ukwanda kwe-167% unyaka nonyaka.
Kusetshenziswa inqubo yokuhlola-yesikhala noma yokuhlola amandla (PoC) Kudinga isikhala esikhulu sokugcina, futhi umkhondo weChia ungabhubhisa ama-SSD anamuhla endabeni yamasonto.
Ngokombiko ovela ku-VNExpress, sebenzisa i-SSD ukukhipha ama-cryptocurrensets kukhokhisa intela kakhulu kudrayivu njengesibonelo esisodwa i-1TB SSD esetshenziselwa ukukhipha iChia kuphela kuzohlala cishe izinsuku ezingama-80 uma kuqhathaniswa neminyaka eyi-10 yokusebenzisa i-disk kwezinye izimo.
Futhi, izinhloso zemvelo kaChia ziye zabuzwa kabanzi muva nje, futhi isiqeshana seChia asisabhekwa njengokunye okunjalo kwemvelo. Kusukela lapho, i-cryptocurrency yehle isuka ekukhuleni okufishane kwe- $ 1,685 cishe ezinyangeni ezintathu ezedlule kuya ku- $ 249 nje.
Eqinisweni, ngemuva kokwethulwa kwayo ngoMeyi, uChia wafinyelela intengo engu- $ 1,685 futhi selokhu wehla waya ku- $ 212 ngasekupheleni kuka-Agasti 2021, emele ukwehla kwenani elingaphezulu kwama-85% ngoMeyi. Lokhu kusho ukuthi izinto abazisebenzisile ukukhipha i-chia kuzofanele zithengiswe.
Kwezinye izimo, Abavukuzi bakudala bakaChia bathengisa ama-SSD abo asetshenzisiwe benza sengathi basebasha sha. Lokhu kungadala ukudumala, njengoba umuntu ebengalindela ukuthi irekhodi elisha lizohlala iminyaka kunezinyanga.
Lokhu kusho ukuthi bazowathengisa angaphansi kwenani lemakethe, njengoba ukulandelwa kweChia kungabhubhisa ama-SSD aphakathi ezinyangeni ezimbili, futhi kuthiwa amadrayivu asetshenzisiwe athengwa ngobuningi ayavuselelwa futhi athengiswa njengokusha, lapho isidingo salezi amadiski asephezulu kakhulu. Ngakho-ke mhlawumbe kuyisikhathi nje ngaphambi kokuthi la ma-SSD avuselelwe akhishwe kwezinye izimakethe njengalo lonke elase-Asia, iYurophu, kanye ne-United States.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Abavukuzi baseChia bagxumela olwandle futhi bathengisa konke